Soo dejisan Comodo Internet Security Complete 12.1.0.6914 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudComodo Internet Security Complete
Bogga rasmiga ah: Comodo Internet Security Complete
Comodo Internet Security Complete – software casri ah oo casri ah oo falanqeyn kara dabeecada faylka kasta ee la fulin karo iyo habka socodka, iyo xannibaadda hawlahooda shaki. Software wuxuu taageersan yahay tiknooloojiyada taranka alwaaxda si loo ogaado faylasha khatarta ah, iyo dab-demiska la dhisay ayaa bixiya heer aad u sareeya oo ka hortag ah khataraha soo socda iyo kuwa socda. Comodo Internet Security Ful buuxiya fayraska iyo fayruusyada eber-gii ah ee ka dhasha habka ugu weyn by by goynaya faylasha aan la garanayn iyo shaki ku jira degaan ammaan ah ammaanka. Nidaamka difaaca ee la ilaaliyo ee codsiyada antivirus codsiyada inta lagu jiro xiriirka shabakadaha dadweynaha iyo shabakadaha wireless, oo abuuraya shabakad tiknoolajiyad khaas ah si loo qariyo macluumaadka shakhsiyeed ee dadka isticmaala inta web surfing. Comodo Internet Security sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad kaydiso xogta xogta gaarka ah ee macluumaadka isticmaalka qadka interneetka ee lagu kaydiyo, kaas oo si degdeg ah loogu soo celin karo meel kasta ama nidaam kasta.
Nidaamka antiivirus Proactive
Diiwaanka Shakhsi ahaaneed iyo falanqaynta habdhaqanka
Xakamee isku xidhka Wi-Fi
Kalasoocida automatic ee faylasha aan la aqoon
Kaydinta interneetka oo qarsoodi ah
Soo dejisan Comodo Internet Security Complete
Faallo ku saabsan Comodo Internet Security Complete
Comodo Internet Security Complete Xirfadaha la xiriira